ရောင်​နီဦး: ဆံပင်မကျွတ် ဆံပင်သန်စေမည့် အစားအစာများ
ဆံပင်က ရှည်တာနှေးတယ် ကျွတ်လည်း အရမ်းကျွတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆံပင်တွေဟာ လုံလောက်တဲ့ အာဟာရမရလို့ပဲပေါ့။ လူတွေတောင် အဟာရပြည့်ပြည့်၀၀ မစားသောက်ရရင် ပိန်လှီသေးကွေးနေတတ်သေးတာလေ။ ဒီလောက်ဆိုရင် အရိပ်ပြအကောင်မြင်တတ်တဲ့ ရင်နှင်းသူငယ်ချင်းတွေ ရင်နှင်းဘာပြောမလဲသိနေလောက်ပြီ။ ဆံပင်တွေလည်း လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေရှိမှ ကောင်းကောင်းရှင်သန်နိုင်မှာပေါ့။ ဒါကြောင့် အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားသောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆံပင်သန်စွမ်းဖို့ အဓိကလိုအပ်တဲ့ အာဟာရလေးတွေကိုပေါ့။
a . ဆံပင်ကို ပရိုတိန်းလို့ ခေါ်တဲ့အသားဓာတ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာလေ။ အဲဒီတော့ ဆံပင်သန်ချင်ရင် အသားဓာတ်များများ စားဖို့လိုတာပေါ့။ အသား၊ ငါး ၊ ပဲအမျိူးမျိူး၊ ဥ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ ပဲပင်ပေါက်တို့မှာ အသားဓာတ်များများပါတော့ များများစားပေးနော်။
b . အိုင်အိုဒင်းဓာတ်က ဆံပင်သန်စေတယ်လေ။ အိုင်အိုဒင်းဆားသုံးပေါ့။ ပင်လယ်စာတွေမှာလည်း အိုင်အိုဒင်းဓာတ် ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တန်ဆေး လွန်ဘေးဆိုတာကိုတော့ သတိပြုအုံးနော်။
c . သံဓာတ်ကလည်း ဆံပင်သန်စွမ်းဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့ ဓာတ်လေးပေါ့။ အဲဒီတော့ သံဓာတ်များများပါတဲ့ အသား၊ အသည်း၊ ဟင်းနုနွယ်၊ ဘူးညွှန့်တွေကို များများစားပါ။
d . ဗီတာမင်စီက ခန္ဓာကိုယ်သံဓာတ် စုပ်ယူမှုကို အားကောင်းစေသလို ဆံပင်ကိုလည်း ကျန်းမာသန်စွမ်းစေလို့ နေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာ ဗီတာမင်စီဓာတ် လုံလုံလောက်လောက်ပါဖို့ လိုတယ်နော်။
e . ဖောလစ်အက်စစ်တွေပါတဲ့ အစားအစာတွေ များများစားပေးရင်လည်း ဆံပင်တွေ ကျန်းမာသန်စွမ်းစေ ပါတယ်။
f . Biotin လို့ခေါ်တဲ့ ဗီတာမင် B3 နဲ့ ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုတွေနဲ့ ဗီတာမင်အီး၊ ဗီတာမင်အေ ကလည်း ဆံပင်အတွက် အရမ်းအရေးပါတယ်နော်။ ဦးရေပြားကို သွေးများများသွားစေတော့ လိုအပ်တဲ့ အဟာရဓာတ်တွေများများရပြီး ဆံပင်တွေလည်း သန်တာပေါ့။
ဘယ်ဗီတာမင်ကို ဘယ်အစားအစာကနေ ရနိုင်တယ်ဆိုတာကို သဘာဝရဲ့အာဟာရမှာ ဖတ်ကြည့်နော်။
ဆံပင်မကျွတ်အောင် ဆံပင်သန်အောင် ဘာတွေစားရမလဲဆိုတာ သိပြီးပြီဆိုတော့ ရှောင်ရမယ့် အစားအစာတွေကိုလည်း ပြောပြမယ်နော်။
a . ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ ကော်ဖီနဲ့ အချိုတွေကို အများကြီးစားသောက်ရင် ဆံပင်ကျွတ်တတ်သတဲ့။ ရင်နှင်းကတော့ ယောင်္ကျားတွေ ထိပ်ပြောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကို နည်းနည်းသဘောပေါက်သလိုလိုတော့ ရှိလာပြီ။ :D
b . ကိုလက်စရောများတဲ့ အစားအစာတွေ၊ ဆီကြော်တွေ၊ တိရစ္ဆာန်ဆီတွေကို များများစားရင်လည်း ဆံပင်ကျွတ်နိုင်တယ်နော်။
c. ဆားကို အများကြီးစားတာကလည်း ဆံပင်ကျွတ်စေတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ဆားကိုလည်း တော်ရုံပဲစားပါ။ သွေးတိုးမှာလည်း မပူရတော့ဘူးပေါ့။ :D
ဆံပင်တွေ ကျွတ်တာသက်သာပြီး ဆံပင်တွေသန်ဖို့အတွက် အစားအသောက်ကို ဂရုစိုက်ရမယ်။ ပြီးတော့ ဆံပင်လေးတွေကို ဂရုစိုက်ဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။
မူရင်းလင့်ခ် sai lin ထံမှပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပေးထားပါသည်။
Posted by YaungNiOo at 7:36 PM